Gentoo: သားရဲ၏စိတ်နှလုံး FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ChrisADR | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
၀ င်ငွေနည်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီလှပတဲ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးမျှဝေနိုင်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုအများကြီးလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ငါခြေလှမ်း ၂၀ ထက်နည်းသောလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုငါကတိပေးခဲ့သည်ကိုသင်တို့သိသော်လည်းသင်တို့မူကားအနည်းငယ်သောတွန်းအားကိုစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငါ Gentoo သင်ခန်းစာကိုသူ၏နှလုံးနှင့်၎င်း၏စွမ်းအားအားလုံး၏အနှစ်သာရအကြောင်းပြောဆိုရန်မရပ်တန့်ဘဲမနေနိုင်ပါ။ Portageသင့်ရဲ့အထုပ်မန်နေဂျာ။ နောက်ပြီးသစ္စာခံ Gentoo အသုံးပြုသူအနေနဲ့လည်းအဲဒါဟာပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် နားလည်ပါတယ် အရင်က ပြန်ဆို, နှင့်ဤအတူငါပဲ script ကိုကူးယူဖို့ဘယ်လိုရိုးရှင်းတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုမစတင်မီဆိုလိုသည် (ပြန်ဆို), ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်မှကြောင်းအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိရန်သာ။ ကောင်း၏ ရေးသား ဇာတ်ညွှန်း။ လူသိများတဲ့အတိုင်း:
"လူတစ်ယောက်ကိုငါးတစ်ကောင်ပေးလိုက်ပါ၊ မင်းဟာတစ်နေ့တာရဲ့ဆာလောင်မှုကိုငြိမ်းစေနိုင်ပြီး၊ ငါးဖမ်းတာကိုသင်ပေးမယ်၊ ပြီးတော့သူ့ကိုမင်းအသက်တာအတွက်ကယ်တင်လိမ့်မယ်။ "
နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ရဲ့စတင်ရန်ကြကုန်အံ့:
1 portage ဆိုတာဘာလဲ
3 Portage ၏စိတ်နှလုံး:
4.7 အကွာအဝေး -
4.11 တန်ချိန် -
6 အနည်းငယ်ပို -
PortageGentoo Linux အထုပ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သည်အခြားဖြန့်ဝေ၌သူတို့နှင့်ညီမျှဖြစ်ကြသည် apt (Debian နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ), yum (Red Hat, SUSE နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ) pacman (Arch နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ)... ၎င်းသည်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည် ဆိပ်ကမ်းများ FreeBSD မှဖြစ်သည်၊ Gentoo ကိုတည်ထောင်သူသည် FreeBSD ရာသီကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်နည်းလမ်းများစွာတွင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တူညီခဲ့သည်။ ဒါဟာအစမှာ bash ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည် ပေါ်လာ (command line installation ကိုဂရုစိုက်သော program ၏အမည်) ၄ င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၎င်းတွင်ကျယ်ပြန့်သော bash base ရှိပြီး Python သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။
ကောင်းပြီ၊ Linux အသုံးပြုသူများကဲ့သို့ package manager သည်သင်၏ system ကိုလည်ပတ်စေရန်နှင့်လည်ပတ်စေရန်အတွက်သင်၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုတပ်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြောင်းရန်၊ ဖယ်ရှားရန်နှင့်အခြားအရာများစွာကိုခွင့်ပြုသည်။ Portage ၎င်းကိုအရာတစ်ခုတည်းလုပ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအထူးပြုသည့်အမျိုးမျိုးသောပညတ်တော်များကိုခွဲခြားထားသည် (UNIX တွင်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းတစ်ခု) ။
အခြားအထုပ်မန်နေဂျာများနှင့်မတူသည် (အနည်းဆုံးငါပြောခဲ့ပြီးသောသူများ) Portage ၎င်းသည်၎င်း၏ပါဝါအားလုံးကို configuration file တစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဤဖိုင်သည်လမ်းကြောင်းအတွင်းတွင်ရှိသည် /etc/portage/make.conf ။ ယခုအချိန်တွင် Gentoo တွင်ရှိသောရှုပ်ထွေးသည့်စနစ်ကိုရှင်းပြရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏စွမ်းအားအားလုံးကိုဤဖိုင်သို့အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲပို့ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကိုယ်ပိုင် ခရစ္စတိုဖာ Diaz Riveros
သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ဤလောကမှမဟုတ်သောအရာမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၌ပိုမိုတိကျသောအခြားဖိုင်များရှိသည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်သင်၏ Gentoo လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုအတွက်လုံလောက်မှုထက်ပိုသည်။ အောက်ပါလိုင်းများကိုစတင်ဆန်းစစ်ကြပါစို့။
Gentoo ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်စားမှုအတွက်ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာ C Flags ဖြစ်သည်။ ဤအလံများသည်သင့်အားအမျိုးမျိုးသောအားသာချက်များနှင့်အတူ (ပရိုဂရမ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံအကျဆုံး) စီပရိုဂရမ်များကိုစုစည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ configuration ကိုမြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း -march = broadweel သည်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဂရမ်များကိုပြုစုသောအခါကျွန်ုပ်၏ပရိုဆက်ဆာမျိုးဆက်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ -O2 နှင့် -pipe သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးယူလိမ့်မည်။
Gentoo ဝီကီတွင်ရှင်းပြထားသည့် -March အမျိုးအစားအချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
CHOST သည်ပုံမှန်တည်နေရာနှင့် compiler အမျိုးအစားကိုပြသရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်း variable ကို Arduino ပန်ကာများကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသော compilers များရှိသောကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုသည်။ အခြေခံကျသောဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသွားရန်မလိုအပ်ပါ။
ဤ system variable သည် compiler ၏တည်နေရာကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲ compiler ကိုပရိုဆက်ဆာဗိသုကာနှင့်ညွှန်ကြားချက်များအနေဖြင့် package များကိုပြုစုမည့် hardware platform, operating system နှင့် C library တို့နှင့်၎င်း variable ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်ကိုညွှန်ပြသည်။ make.conf (ထိုတွင်ပေါ်လာသောအရာအားလုံးကဲ့သို့) အခြားဗိသုကာများအတွက်အစုအဝေးများကိုစုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
make.conf ၏ USE အလံများသည်အစီအစဉ်များ၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည်။ ဒီအားဖြင့်ငါဆိုလို မည်သည့် တစ် ဦး အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း program ကို Xcompile လုပ်သည့်အချိန်တွင် X သည် activated လိမ့်မည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင်၏အစီအစဉ်များ (အားလုံးမဟုတ်လျှင်) တွင်သင်အသုံးပြုမည့် USE အလံများအတွက်အတော်လေးအသုံးဝင်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း, gnome y systemd သူတို့ကကျွန်တော့် system ကိုဒီပရိုဂရမ်အမျိုးအစားများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှအရာတိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
၎င်းသည်မြန်သောပရိုဆက်ဆာများ၏အကောင်းဆုံးအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ပါ နာမတော်ကိုအမှီပြု။ အတိုင်း, သူတို့ကကြေညာချက်မှဆက်ပြောသည်ဖြစ်ကြောင်းရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြသည် လုပ် ပရိုဂရမ်တစ်ခုစီကိုပြုစုတဲ့အခါမှာ run သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် -j9 ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား i9 kernel ရှိ thread တစ်ခုစီအတွက်တစ်ချိန်တည်းတွင် program ၉ ခုကိုစုစည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ် ဦး ကပိုပြီးရှေးရိုးစွဲနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် -j5Installation တစ်ခုချင်းစီအတွက်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်ပင် compilation အချိန်သည်အတော်အတန်နည်းသည်။
အိုး…အခုသူတို့စဉ်းစားနေရ ဦး မည်။ ဒီမှာဘယ်ကိုထားရမလဲ၊ အဖြေသည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သောရပ်ရွာလူထုကိုသြဇာသက်ရောက်စေသည့် Gentoo ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ ဒါကိုပြသဖို့၊ အောက်ပါပရိုဂရမ်ကို install လုပ်ပြီးဖွင့်ပါ။
သင်မြင်သည်အတိုင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဆက်ဆာရှိ FLAGS ကိုပြသပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ make.conf ဖိုင်သို့ redirects သို့မဟုတ် nano, vim သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်စာသားတည်းဖြတ်သူနှင့်မဆိုကူးယူနိုင်သည်🙂 (Gentoo တွင်မည်သည့်အရာသည်အလိုအလျောက်ရှိနေသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။ )
ebuilds ၏အရင်းအမြစ်အစပြုသည့်လမ်းညွှန်ကိုသာရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ။ portage program များကို install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပေးသော Bash scripts များ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပို့စ်တစ်ခုအတွက်ထားခဲ့မည်
Gentoo သည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်မှအရာအားလုံးကို install လုပ်သည်နှင့်အမျှဤလမ်းညွှန်သည်သင် download လုပ်နေသော source code အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုအကြောင်းအရာများကိုအခါအားလျော်စွာဖျက်ပစ်လိုပါက၎င်းပရိုဂရမ်များအတွက်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်၊ သို့သော်အခြားအတွက်လည်း post 😉
ကောင်းပြီ၊ နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း၊ သင်၏ဗီဒီယိုကဒ်၏အမှတ်အသားအနေဖြင့် X သို့မဟုတ် Wayland ကဲ့သို့သောအရာများကိုတပ်ဆင်သောအခါဒရိုင်ဘာများကိုတပ်ဆင်ရန်မတားဆီးနိုင်ပါ။
မင်းရဲ့စနစ်ကိုထောက်ပံ့ချင်တဲ့ဘာသာစကားအားလုံးကိုထည့်နိုင်ဖို့အတော်လေးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့နေရာ။ ငါ့ကိစ္စမှာငါပီရူးစပိန်လိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိုအပ်ရင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်။
ငါ GNOME ကိုသုံးသောကြောင့်သင်၏အရံပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သောပုံစံသို့မဟုတ် driver libinput ပါ ကျွန်တော့် touchpad ကိုဂရုစိုက်သည်။ အစားထိုးခံရကြောင်းအခြားလူသိများ option ကိုဖြစ်ပါတယ် မြတ်နိုး.
ပရိုဂရမ်းမင်းအကြောင်းသိသူများသည်ယခင်တွင်ဘာမျှမပါ ၀ င်သည်ကိုသိကြလိမ့်မည်။ သို့သော်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ပါ အရာ ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများစွာဖြင့်😉။
ဤရွေ့ကား variable တွေကိုတပ်ဆင်ထားပရိုဂရမ်များ၏ဘာသာစကားကိုသိခွင့်ပြု, ငါ့အမှု၌အင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်နှစ် ဦး စလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
အ ပစ်မှတ် ၎င်းတို့သည်အခြားထူးခြားသော Gentoo Linux ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြသသည်။ တူညီသောစနစ်အတွင်း၌ကွဲပြားသောဗားရှင်းများရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Ruby ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃ နှင့် ၂၄ တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်ပconflictsိပက္ခမရှိဘဲ Python, Apache, Tomcat, MariaDB ကဲ့သို့တူညီသောအချက်များရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရပ်ကွက်ရှိ SLOT ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အပြည့်အဝစာရာ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအခြားအခွင့်အလမ်းအတွက်ထားခဲ့လိမ့်မည်
သင်၏ ebuilds စုဆောင်းမှုကိုသင်ကူးယူမည့်နေရာများသည်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည့်အခါ Access Point များရရှိနိုင်ရန်အထူးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ebuild စာရင်းကို Github မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဤအရံနှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် git pull ကို download လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည် (ရေးသောအခါ Gentoo သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ပေါ်ထွက်လာသော -sync)
ဤရွေ့ကားအားလုံးရွေးချယ်စရာမရှိကြပေ အောင်နိုင်သူ၊ များစွာသောအရာများစွာရှိနိုင်ပြီးအချို့သည်ပိုမိုအားသာချက်များသို့မဟုတ် configurations များကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောစနစ်ရှိရန်လုံလောက်သည်။
ဒီဖိုလ်ဒါထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒါမှသာလူသိများဖို့ကျန်နေသေးတဲ့အရာ၊ ဒီနေ့ခေတ်နှင့်ရေးသားချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်အရာများကိုစိတ်ကူးနိုင်ဖို့🙂🙂
ငါအနည်းငယ်ပိုပြီးမှတ်ချက်ပေးရန်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး, ငါအနည်းငယ်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်ဤဖိုင်တွဲ၏အထူးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖိုင်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် မိတ်ကပ်။ Gentoo ပရိုဖိုင်းများသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သီးသန့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် USEs အားလုံးကိုရေးသားရန် (သို့) သိရန်မလိုပါ။ သင်သည်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်၍ ၎င်းမှစတင်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Gentoo ၌ရှိသည့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၏စာရင်းဖြစ်သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါရဲ့ပရိုဖိုင်းကို GNOME နဲ့ systemd သုံးပြီး desktop ပေါ်မှာ amd64 နဲ့ရွေးလိုက်တယ်။ ဤပရိုဖိုင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် USE အလံများနှင့်အခြားချိန်ညှိချက်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏စနစ်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောအနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်သည်။ (သေချာတာပေါ့သူတစ်ယောက်ကသူကအရာရာကိုခြစ်ရာကနေစစဉ်းစားရမယ်ထင်တယ်၊ ဒီမှာလိမ်တယ်😉)
ကောင်းပြီ၊ သင်၏မျက်လုံးများအတွက်ကျွန်ုပ်လက်ထဲတွင်မရှိသော post အခြားပို့စ်တစ်ခု Gent Gentoo ကိုကြိုးစားလိုသောဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် installation လမ်းညွှန်ကိုဖန်တီးသောအခါကျွန်ုပ်သည် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားရနိုင်သည်။ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Gentoo: သားရဲ၏စိတ်နှလုံး
Eduardo Vieira ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသော post ကိုစီးရီး။ ငါ Gentoo အကြောင်းကိုသိချင်တယ် ငါသည်လက်ရှိ operating system အဖြစ် BtrFS နှင့် Snapshots နှင့်အတူ Arch ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါ့ကိုတားဆီးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာကကျွန်ုပ်၏လက်ရှိကွန်ပျူတာသည် (အားအင်စတီကျု) အလွန်အင်အားမကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၌ရှိသော package များအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်အမြဲတမ်းကြာလိမ့်မည်။ ငါလာမယ့် PC ကိုဝယ်တဲ့အခါ Gentoo ကိုသေချာစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါ Eduardo your သင့်မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ယခုအခန်းဆက်၏နောက်အခန်းထွက်လာသည်။ Gentoo installation လမ်းညွှန်နှင့် ပို၍ နီးကပ်လာသည့်အဆင့်။ 🙂ကျွန်ုပ်သည်ဤရာထူးမစတင်မီအချက်နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြလိုသည်။ ၎င်းသည်များစွာသောသူတို့ကိုသူတို့၏ system များတပ်ဆင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ရွှင်လန်း!
ငါ gentoo လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က p2 ပေါ်မှာ 300mhz မှာ 64 သိုးနှင့်အတူပြုစုခဲ့သည်။ ဒါကဟာသမဟုတ်ဘူး။ တစ်ပါတ်တွင်အရာအားလုံးအဆင်သင့်😀ရှိသည်
အမှန်တရားက Gentoo ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်သည်
ပို့စ်အပိုင်းအစ! အရင်တုန်းကလိုပဲ၊ ဒီတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟာသင့်ကိုရှင်းလင်းချက်ကိုချန်ရန်ရဲရဲ
CHOST -> ဒီစနစ် variable ကို compiler ၏တည်နေရာအဖြစ်ဖော်ပြမထားဘူး, ဒါက compiler ကိုပရိုဆက်ဆာဗိသုကာနှင့် optional ကို packages များ compiled ပါလိမ့်မည်သည့်အဘို့အဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်း, operating system နဲ့ C ကိုစာကြည့်တိုက်ညွှန်ပြပေမယ့်ဒီ variable ကိုဖြစ်ပါတယ် make.conf အတွင်းတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားသည် (ထိုတွင်ပေါ်လာသောအရာအားလုံးကဲ့သို့) ဘာမျှမကအခြားဗိသုကာများအတွက် packages များ compiled ခံရဖို့တားဆီး။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုမမေးသော်လည်း, အပိုဆောင်း: ငါသည်ဤအချက်မှာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေရန် Gentoo (နှင့် derivatives) ကိုအခြားဖြန့်ဖြူးအပေါ်အသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအားသာချက်, အလွန်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်, အရာအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်မဟုတ် သင်၏ hardware သာမကပဲသင်၏ Poettering bodoques [SystemD, pulseaudio နှင့် NetworkManager] ပေါ် မူတည်၍ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်သောစနစ်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေကဲ့သို့သင်၏အရသာနှင့်အတွေးအခေါ်များလည်း (ဤကမ္ဘာတွင်ကမ္ဘာ့စစ်ဖြစ်ပွားမည်မဟုတ်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ >) သူတို့ကို OpenRC (Gentoo အသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်တိုင်ကတီထွင်ခဲ့သော System init၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကိုဖော်ပြခွင့်ပြုပါကစစ်မှန်သောကျောက်မျက်ရတနာ) ဖြင့်အစားထိုးခြင်း (သို့မဟုတ်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါက runit ကိုလည်းထောက်ပံ့သည်), alsa နှင့် wpa_supplpicant အသီးသီး၊ နှင့်ငါ Hallelujah ပြော !!! = P
Wow, အလှူငွေများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂နေရာအားလုံး၌ရှိသကဲ့သို့၊ အသစ်သောအရာများကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအခန်းတွင်မဖော်ပြထားသော်လည်း make.conf ရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့၎င်းသည်ပိုမိုအထူးပြုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။ သီးခြားဖိုင်များသို့မဟုတ်စနစ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်။
ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား ၁၀၀% မှန်သည်ဟုပြောရန်ဝမ်းသာပါသည်။ Gentoo ၏ကျောက်မျက်သည်သင်၏ system ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်အခြားအရာအားလုံးဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ တည်းဖြတ်သူများကသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုထိပ်ဆုံး၌ထည့်ရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များပေးနိုင်သလား၊ they အကယ်၍ မြင်တွေ့ရလျှင်၊ အရည်အသွေးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်အလွန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ငါမင်းကိုမင်းရဲ့အကောင့်ထဲ gmail chat ကနေတဆင့်မင်းကိုရေးပြီးဖတ်လိုက်ပြီ။
စွန့်ပစ် ၆၄ ဟုသူကပြောသည်
gentoo ကိုကြိုးစားချင်သည့်ဆန္ဒပြင်းပြစွာဖြင့်လာမည့် post ကိုအမှန်တကယ်မျှော်လင့်သည်မှာကြာရှည်စွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းမပြုဘဲနေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
မင်းရဲ့သိချင်စိတ်ကမင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့အတွက်ငါအရမ်း ၀ မ်းသာပါတယ်။ ဆိုလိုတာကငါတို့ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်နေတယ်။ \_ t
ငါရည်ညွှန်းအဖြစ်ရှိသည်နှင့်အနာဂတ်အဘို့ဤပို့စ်များကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Gentoo ကို PC မှာ Processor အသစ်တစ်ခုတပ်လိုက်ရင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့လက်ရှိကွန်ပျူတာကနောက်ကျသွားပြီ။ ငါ Arch Linux ကိုအတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်။
Claro Mart 🙂ဤအကြံဥာဏ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အဆင်ပြေပါစေ။ ငါ့မှာ Arch နဲ့အခန်းကန့်လည်းရှိတယ်၊ Gentoo မရှိရင်ငါနေ့တိုင်း Arch နဲ့ Kali linux နဲ့တွဲသုံးမယ်။
ကောင်းပြီ၊ အခြေခံစနစ်အတွက်ဒီစုစည်းမှုသည်မရှည်လွန်းပါ။ အလင်းရောင်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ (xfce သို့မဟုတ် mate သို့မဟုတ် lxde ကဲ့သို့) သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာများ (i3, openbox, fluxbox, awesome စသဖြင့်) အတွက်အတော်လေးတိုသည်။ အခုတော့ gnome, kde သို့မဟုတ် cinamon စတဲ့ကြံ့ခိုင်ပြီးပြည့်စုံသော desktop environment များအချိန်ယူရမည်။ သို့သော်စိတ်ဝင်စားစရာမှာ compile လုပ်ရန်အချိန်အများစုမှာ web browser များ (firefox သို့မဟုတ် chrome ကဲ့သို့)၊ သို့သော် qutebrowser သို့မဟုတ် palemoon ကဲ့သို့သောအလွန်လေးသော browser များနှင့်ရုံးအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ gentoo ကဒီပရိုဂရမ်တွေအတွက် binaries ကိုပေးတယ်၊ စုစည်းမှုကအဲဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်သင်တစ်ခုခုအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
သင့်တွင် dual-core ကွန်ပျူတာရှိရင် ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက်မှာကွန်ပျူတာကိုလုံလုံလောက်လောက်စုဆောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ (kde or gnome လိုမျိုးအားကောင်းတဲ့ desktop ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်နာရီအနည်းငယ်ဆိုလိုချင်တာက) ဒါပေမယ့် browser နဲ့ office ကိုပေါင်းဖို့ဆိုရင် အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ငါညအချိန်တွင်ပြုလုပ်ရန်၊ အကယ်၍ အလိုရှိပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု၍ binaries ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်
ယခု gentoo 🙂နှောင့်ယှက်ရန်အလှည့်ပါပဲ
ubuntu, mint စသည့်မည်သည့် "debian based" ဖြန့်ဖြူးမှုကိုမဆိုအလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ cpu အတွက်အသင့်တော်ဆုံးသော package များအားလုံးကိုစုစည်းထားသည်။
ဟဟဟာဟာလုံးဝစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး၊ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ပါ။ သူတို့ဟာ Debian မှာလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတာတွေကိုဝေမျှဖို့လာပါတယ်။
သူမသိခဲ့ဘူး ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသံဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ? apt-build သည်၎င်းတို့အားလုံးကို Gentoo ကဲ့သို့သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာမှီခိုမှုအားလုံးနှင့်အတူကိုင်တွယ်သည်သို့မဟုတ် apt-build ကိုယ်တိုင်သူတို့အားလုံးအတွက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ apt-build ထောက်ခံမှုသည် Gentoo ကဲ့သို့လား။
ကောင်းပြီ၊ install လုပ်ပြီးသည်နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများသည်“ emerge –ask -update –deep –newuse @world” သို့မဟုတ်၎င်း၏တိုတောင်းသော version“ emerge -avuDN @world” ကိုဖြေရှင်းရန် command တစ်ခုတည်းဖြင့်ရှိကြသည်။ ပရိုဂရမ်၏လတ်တလောဗားရှင်းသို့ပြောင်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်
ဆိုလိုတာက debian လား gentoo လားမသိဘူးဒါပေမယ့် debian အတွက်ကတော့ဂန္ထဝင်ပါ။
apt-build update ကို
ထို့နောက်၎င်းသည် packets များစာရင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးရင်းမြစ်များကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ၎င်းနှင့်အရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက် download လုပ်သည်။
ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ ပိုကောင်းတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုတော့မရှိဘူး။ သူတို့အားလုံးကောင်းတယ် အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးဘာသာစကားကိုမေးတာနဲ့တူတယ်။
ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းပေ၏။ သို့သော်သင်၏သွားများကိုကြိတ်ဆုံစေသည့် gringo အသုံးအနှုန်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ စင်ကြယ်သောမိမိကိုယ်ကိုသတိရှိသောတတိယကမ္ဘာ xD ကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော“ wow” ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ Gringos xD ၏မူလဘာသာစကားထက်အလွန်ကြွယ်ဝပြီးအလွန်စုံလင်ပြီးကောင်းစွာတင်ဆက်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောဘာသာစကားကိုအသုံးပြုကြပါစို့။ ဘယ်အချိန်မှာငါတို့ဟစ်စပန်းနစ်ခွေး ("wow = wow") ကဲ့သို့ဟောင်ခဲ့ကြသလဲ xD ။
ဆောင်းပါးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ Gentoo ကမ္ဘာမှာစမ်းသပ်လိုစိတ်ပြင်းပြစေမယ့်ကွန်ပျူတာနည်းနည်းလေးရှိတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲသော tartana ဖြင့်အခြေခံစနစ်ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားရက်အနည်းငယ် xD ကြာလိမ့်မည်။
: / တကယ်ငါ့ထံသို့ရာအရပျထဲကပုံရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်နိုင်ငံမှဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပိုမိုနားလည်နိုင်သည်၊ သို့သော်လက်တင်အမေရိကရှိအင်္ဂလိပ်များမှာမူများသောအားဖြင့်တွေ့ရတတ်သည်။ ထို့အပြင် Gentoo developer မြေပုံကိုကြည့်သောအခါသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ တောင်အမေရိက (သို့) စပိန်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ ငါအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောနေတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ရေးသားပုံနည်းလမ်းအရ၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောအရည်အချင်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုရခြင်းနှင့် ပိုမို၍ ပင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများကိုဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိပြီး၊
စက်များအနေဖြင့်၊ သင်ကြိုးစားသည်အထိသင်ဘယ်တော့မှသိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ packages စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အများစုသော packets များအတွက်မြန်သည်။ firefox သို့မဟုတ် thunderbird ကဲ့သို့အလေးလံဆုံးသူများသည်အချိန်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း Gentoo သည်လည်း binary version များပို့ခြင်းအားဖြင့်ထိုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည် (ပုံမှန်စတိုင်လ်) ) ဒီတော့ compile အချိန်သူတို့အားလေးလံသောအစီအစဉ်များအတွက်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ် ards
ပို Larry ရဲ့နှလုံးနဲ့တူ။
Gentoo-sources: သေဖို့မလိုဘဲ Kernel ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ